Hafatry ny Eveka » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Tag Archive: Hafatry ny Eveka
Ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, soloin’ny Filohany SE Mgr Désiré Tsarahazana, Arsevekan’i Toamasina, ny Filoha lefitra, SE Mgr Fabien Raharilamboniaina, Evekan’i Morondava ary ny Sekretera Jeneraly SE Mgr Jean Claude Randrianarisoa, Evekan’i Miarinarivo, tena, dia manao fanambarana manoloana ireo fanafihana mitam-piadiana mampivarahontsana, narahina herisetra ara-batana mifono habibiana, izay nihatra tamin’ireo ankohonampiainan-drelijiozy lahy sy vavy teto …
Niampy iray ny diosezy eto Madagasikara. Ny 8 febroary no najoron’i Papa Fransoa ho diosezy Maintirano. Mba hahatsotra ny fahazoantsika azy dia mifandraika amin’ny faritr’i Melaky ity diosezy vaovao ity. Araka izany dia tanan-dehibe dimy no mandrafitra azy : Maintirano, Ambatomainty, Morafenobe, Antsalova ary Besalampy. Mirefy 33.794 km2 ny diosezin’i Maintirano, 264.494 ny isan’ny mponina …
Ho aminareo anie ny Fiadanana Ry havana malala, Noho ny fitsimbinan’Izy Tompo dia tontosa soa aman-tsara ny famangiana notanterahin’i Ray aman-dReny, ny Kardinaly Pietro PAROLIN, Sekreteram-panjakana ao amin’ny Fiketrahana Masina, nirahin’ny Papa Ray masina Fransoa manokana, hiara-mankalaza ny faha-50 taona niaraha-miasa teo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Fiketrahana Masina any Vatikana. Eny fa na dia …
Loharano : Lakroan’i Madagasikara Ry hava-malala ao amin’ny Tompo manerana ny Nosy, Tonga indray ity ny fetin’ny Noely Andriamanitra mihitsy no tonga miara-monina amintsika. Olona mitovy amintsika, iray petsapetsa amintsika. Fitiavana tapitr’ohatra izany ary fanetren-tena tonga lafatra satria tsy hita tsirihina ny halalin’ny Famindrampony. Ho an’ny olombelona rehetra tsy ankanavaka no nahatongavan’ilay Mesia. Ary …
Hafatra avy amin’ny Fivondronamben’ny eveka
“Izaho no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana” Jn 14,6 Ho antsika kristianina rehetra sy ireo tsara sitra-po eto amin’ity Nosy malalantsika ity! Homba anareo anie ny Fiadanan’i Kristy! Nandritra iny taonan’ny famindram-po iny no nibanjinantsika an’i Jesoa Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana. Tamin’ny Teniny, tamin’ny Asany ary tamin’ny Fiainany manontolo, no nanehoany izany Famindram-po tsy …
Nivory tsy ara-potoana ny Fivondronamben’ny Eveka ny 11 aogositra lasa teo. Natombok’izy ireo tamin’ny tenin’i Jesoa tao amin’ny evanjelin’i Md Marka ny hafatra : “Onena izy nahita ity vahoaka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry”(Mk 6,34) Noraisin’izy ireo ihany koa ny voalazan’i Ezekiela mpaminany manao hoe : “Ny very hotadiaviko; ny nania haveriko; ny …
Loharano : Lakroa.mg Ho an’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga eto amin’ny firenena, Ho an’ny vahoaka malagasy sy ireo olona tsara sitra-po. Homba anareo mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompo ! Tankina ny malagasy rehetra raha nandre tao amin’ireo fampitàm-baovao ny zava-nitranga nahatsiravina izay nahitàna fandripahan’olona tsy manan-tsiny nataon’ireo dahalo ka nahafoizana ain’olona maro. …
Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : Ny Famindram-po no sitrako, fa tsy ny sorona !
Ny Famindram-po no sitrako, fa tsy ny sorona ! Efa hisasaka ny tonontaona niainantsika ny Jobilin’ny Famindram-pon’ny Ray, nosokafana tamin’ny 8 desambra 2016 teo. Dimy volana no lasa, ary afaka fito volana eo dia hofaranana amin’ny fomba manokana, arak’izay efa nambara, amin’ny alahadin’i Kristy Mpanjaka, ny 20 novambra 2016. Ny tontolom-piainantsika anefa milentika ao anatin’ny …
Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka, mey 2015
Nivoaka ny 13 mey teo ny hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka ho an’ny kristianina sy ireo tsara sitra-po rehetra. Mizara telo ny hafatr’ireo eveka : Milaza miara-mahita : ampatsiahivana ireo toe-javatra iainan’ny firenena ankehitriny. Ny ahiahy tsy ihavanana : fanazavana ireo taratasy nataon’ny FIvondronamben’ny Eveka ary fanamafisana fa adidin’ny Fiangonana ny mampihavana. Ndeha ary isika hiara-mientana …